Dowladda Soomaaliya oo jartay isusocodka Gobolada Sh/Hoose iyo Banaadir. – Soomaali 24 Media Network
Dowladda Soomaaliya oo jartay isusocodka Gobolada Sh/Hoose iyo Banaadir.
Posted on July 21, 2019 Leave a Comment on Dowladda Soomaaliya oo jartay isusocodka Gobolada Sh/Hoose iyo Banaadir.
Muqdisho-soomaali24-Hey’adaha amaanka dowladda ayaa xiray guud ahaanba waddada dhanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kasoo gasha magaalada Muqdisho.
Hay’addaha dowladda u qaabilsan Nabad-galiyada ayaa xalay ilaa saakay waxa ay ku howlanaayeen dhiggista Dhagxaan waaweyn oo lagu gooyay wadada laamiga ee Ex Koontarool Afgooye, waxaana la ogeyn sababta ka dambeysa in laxiro waddadaas oo muhiim u aheyd isusocodka Gobolada Shabeellada Hoose iyo Banaadir.
Majiraan wax gaadiid ah oo ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose iyo guud ahaanba duleedka Koonfureed ee Muqdisho, kuwaas oo gudaha u galaya magaalada waxayna ku kala wareegayaan kasoo hor jeedka xarunta ciidanka Asluubta oo ku dhaw Isgoyska Ex Koontarool Afgooye.
Waddada lagu jaray dhagaxda ee Muqdisho kasoo gasha dhinaca degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay muhiim u tahay ganacsatada gobolada Shabeellada Hoose iyo Banaadir, waxaana inta badan is ticmaala gaadiid Khudaar iyo Caano Muqdisho kasoo galiya dhanka Gobolka Shabeellada Hoose.
Dadka ku nool xaafadaha ka agdhaw Ex Koontorool Afgooye ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay hey’adaha amaanku ku howlanaayeen xiridda waddooyinka Jid cadayaasha ah ee mara hareeraha Isgoyska Ex Koontorool Afgooye.
← Dad doonaya doorashooyin cadaalad ah oo isugu soo baxay Moscow
Inka badan 100 Askari oo Tababar looga furay Dugsiga Tababarada Harqaboobe ee Gurceel. →